त्रिविले अनलाइनबाट स्नातकोत्तर तहको भर्ना लिने - Tech News Nepal Tech News Nepal
२०७८, १४ श्रावण बिहिबार
जोकसैले यसरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ तपाईंको मोबाइल
फेसबुकमा स्पोन्सर पेज र एडबाट छुटकारा पाउन यसो
देशभर १४ हजार केन्द्रमा पुग्यो निःशुल्क इन्टरनेट
दूरसञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका यी ५ कम्पनी, जसले
नथिङले ल्यायो अहिलसम्मकै सस्तो एएनसी इयरबड्स, यस्तो छ
ग्लोबल इन्टरनेटबाट आफैं छुट्टिँदै रुस, सफल भयो परीक्षण
अक्सिजन र मुटुको गति नाप्ने रियलमी स्मार्टवाच नेपाली
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको नयाँ भर्ना अनलाइन माध्यमबाट खोल्ने भएको छ । भौतिक उपस्थितिमा मात्रै भर्ना प्रक्रिया कुर्दा धेरै समय पर्खनुपर्ने भएकाले अनलाइन माध्यमबाट भर्ना अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. शिवलाल भुसालले यसै साता स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्ना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन वैशाखबाटै गर्ने कार्यतालिका रहे पनि कोरोना ९कोभिड–१९० प्रभावका कारण त्यो प्रभावित भएको थियो । यसका साथै स्नातक तहको कतिपय परीक्षाफल अझै प्रकाशित हुन बाँकी रहेका कारण पनि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
विश्वविद्यालयमा यो भर्ना खुलेपछि विद्यार्थीले व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्र, विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन पाउनेछन् । अनलाइनबाट भर्ना प्रक्रिया खुला गरिए पनि जनजीवन सामान्य भएको अवस्थामा थोरै विद्यार्थी भएका विषयमा भौतिक उपस्थितिमै पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी उनले दिए । -गाेरखापत्र
विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम
पाल्पा । कोरोनाका कारण लामो समय ठप्प भएको पठनपाठन सहज बनाउन विद्यार्थीलाई निःशुल्क चल्ने सिमकार्ड
अनलाइन प्राविधिक मेला ‘डेल्टा २.०’ सम्पन्न
काठमाडाैं । नेपालकै पहिलो प्राविधिक मेलाको रूपमा आयोजित डेल्टा २.० सम्पन्न भएको छ । डेल्टा
स्मार्टपालिका र कारखानाबीच सहकार्य, हरेक स्थानीय तहमा वैज्ञानिक शिक्षा प्रवर्द्धन गरिने
काठमाडौं । स्थानीय निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको स्मार्टपालिका र अनुभवमा
लोकसको आयोजनामा क्वान्टम कम्प्युटिङ वर्कशप सुरु
काठमाडौं । इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर विभागका विद्यार्थीहरुको संयुक्त पहलमा सञ्चालमा ल्याएको संस्था लोकसले ‘क्वान्टम कम्प्युटिङ
जोकसैले यसरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ तपाईंको मोबाइल ब्यालेन्स
अक्सिजन र मुटुको गति नाप्ने रियलमी स्मार्टवाच नेपाली बजारमा, कति होला मूल्य ?
स्याटेलाइट प्रक्षेपणको प्रक्रिया खारेज, सन् २०२२ भित्र स्याटेलाइट राख्ने योजना अब के हुन्छ ?
नथिङले ल्यायो अहिलसम्मकै सस्तो एएनसी इयरबड्स, यस्तो छ मूल्य र फिचर
टेलिकममा कर्मचारीको आन्दोलन जारी
फेसबुकमा स्पोन्सर पेज र एडबाट छुटकारा पाउन यसो गर्नुहोस्